Ny fifandraisana misy eo amin'ny personas, ny dia an'ny mpividy, ary ny fantsom-pivarotana | Martech Zone
Ekipa mpivarotra haino aman-jery miditra miasa no mampiasa buyer personas, mahatakatra mividy dia, ary manara-maso akaiky ny fantsom-pivarotana. Manampy amin'ny famoahana lesona fampiofanana momba ny fampielezankevitra nomerika marketing sy personas mpividy miaraka amina orinasa iraisam-pirenena aho izao ary nisy nangataka fanazavana momba ireo telo ireo ka heveriko fa mendrika hifanakalozana hevitra izany.
Mikendry iza: Personas mpividy
Vao tsy ela akory izay no nanoratako momba ny personas an'ny mpividy sy ny maha-zava-dehibe azy ireo amin'ny ezak'izy ireo amin'ny varotra dizitaly. Manampy izy ireo ary mikendry ny fifandraisanao mifototra amin'ny jeografia, indostria, firmagraphic (B2B) toetra, na demografika (B2C) toetra mampiavaka. Ny tanjon'ny Firmagraphic dia mety ahitana ny toetra amam-barotra sy ny toeran'ny asa.
Ny mpividy Personas dia manampy ny vinavinanao na ny mpanjifanao hifandray tsara kokoa amin'ny vokatrao na serivisinao miorina amin'ny zavatra ilainy sy ny soatoaviny.
Vakio bebe kokoa momba ny Personas mpividy
Mikendry rehefa: mividy dia
Buying Journeys dia famakafakana inona sehatra ny dia ataon'ny mpanjifa na ny orinasa ary raha toa ianao ka manana izany dingana izany amin'ny ezaka varotrao.
Tsotra kely ny dia ataon'ireo mpividy:
Ny mpividy dia manana olana mikaroka izy ireo.
Tsy mitovy ny fikarohana ataon'ny mpividy vahaolana noho ny olan'izy ireo.
Ny mpividy dia manangana lisitry ny fepetra takiana fa tsy maintsy mivaha ny vahaolana.
Ny mpividy dia manadihady ny raharaham-barotra sy / na ny vokatra na serivisin'izy ireo.
Ny dia amin'ny fividianana orinasa dia mety hanampy dingana roa kokoa satria ny fanapahan-kevitry ny fividianana dia matetika atao ao anatin'ny tontolon'ny ekipa izay takiana amin'ny mpikaroka ny manangona ny vaovao ary mitondra azy ao anaty ho an'ny maso avy amin'ireo mpitarika ny ekipa voakasik'izany sy ireo mpanapa-kevitra.
Fankatoavana ny olana, ny vahaolana ary ny takiana.
The fifanarahana ny fanapahan-kevitry ny fividianana dia natao tamin'ny ekipa sy mpanapa-kevitra voadona.
Izy roa ireo koa dia mety handraraka amin'ny fanapahan-kevitry ny mpanjifa… mieritreritra mpivady mividy ny fiarany manaraka. Mety hanangona ny fampahalalana rehetra ny vady, hiady hevitra amin'ny fianakaviany, ary hanao marimaritra iraisana.
Vakio bebe kokoa momba ny dia nataon'ny mpividy
Ny fifandraisana misy eo amin'ny personas ny mpividy sy ny dian'ny mpividy dia io no matrix izay tokony hamokaran'ny departemantan'ny varotrao ny atiny, ny fampiroboroboana ary ny paikady kendrenao.
Manana paikady miditra sy mivoaka izay mikendry ny olona tsirairay amin'ny dingana tsirairay amin'ny dia ianao? Mety ho hita ve ianao eo am-pikarohan'ireo mpividy ny dingana tsirairay amin'ny dia? Tena manampy tokoa ny fananganana ara-bakiteny an'io matrix io. Ho an'ny doka, ny fampielezan-kevitra novokarinao. Ho an'ny paikady varotra fikarohana sy votoaty, anao izany tranomboky atiny.
Vola azo vinavinaina: Fantsona fivarotana
Ny dia fividianana dia ny dingana misy ny mpividy anao… ny fantsom-pivarotana dia fandrefesana ny mpividy raha toa ka akaiky ny fifandraisany amin'ny fividianana. Ity fakana sary an-tsaina ity dia zava-dehibe satria manome ny mpivarotra sy ny mpivarotra fijerena ny fantsom-pivarotana sy ny varotra… izay ny totalin'ny vinavina sy ny halaviran'ny fividianan'izy ireo.
Ny fantsom-pivarotana dia sary an-tsaina mijery avy any aoriana amin'ny fandaminana amin'ny alàlan'ny fizotry ny fividianana amin'ny fomba fijerin'ny mety hiteraka fidiram-bola. Ny mividy dia dia sary an-tsaina manantena ny fividianana amin'ny fomba fijerin'ny mpividy sy ny mety ahazoany mividy.
Noho ny fomba fijerin'ny tsirairay avy dia tsy voatery hisy ny fampitandremana fohy eo amin'izy roa. Ohatra vitsivitsy:
Ny mpividy dia mikaroka momba ny olana mahazo azy ireo (Dingana fitsangatsanganana mpividy 1) ary manana taratasy fotsy feno ianao momba ny lohahevitra manabe azy ireo tanteraka, manome vahaolana ary misy vokany tsy mampino azy ireo momba ny fahaizan'ny orinasanao. Mikasa izy ireo (Dingana fandefasana varotra D.) hividy ny vokatrao raha mbola mandeha tsara ny tombana.
Mety ho tonga ny mpividy Fantatr'i (Dingana Fantsona fivarotana A) ny vokatrao na serivisinao ao amin'ny vahaolana dingana (Dingana fitsangatsanganana mpividy 4). Angamba izy ireo nahita ny olana, nanangana takiana, ary avy eo nahita tatitra momba ny mpandalina na lahatsoratra miresaka vahaolana azo eny an-tsena.
Ny ekipa iray mety handinika ny vahaolana (Stage Funnel Stage E.) ary avy eo miverina amin'ny ekipa ary manafoana ny vahaolana (Dingana fitsangatsanganana ho an'ny mpividy 6) ho an'ny tsy fetezana fampiasa manokana na fampiasa manokana.
Ny mpividy motera fikarohana dia maniry ny hividy (Dingana fandefasana varotra D.), manamarina ny naotin'ny vokatrao, ny hevitrao ary ny vidiny (Dingana fitsangatsanganana mpividy 5) manampy ny vokatra ao anaty sarety fa mandao. Mandefa azy ireo mailaka sarety nilaozana izy ireo ary rehefa manana teti-bola izy ireo dia manao ny fividianana.
fotoana fomba iray hafa izay misy ny tsy fitoviana eo amin'izy roa. Ny mpividy sasany dia mety maharitra 2 herinandro vao manapa-kevitra ny hividy. Ny hafa mety hiandry herintaona vao manapa-kevitra ny hividy. Samy mamakivaky ny dian'ny mpividy sy ny vavam-barotrao ny hafainganana amin'ny hafainganam-pandeha hafa.
Vokatr'izany, ny ekipa mpivarotrao dia mety handinika tsara ny fiatraikany amin'ny dingana tsirairay amin'ny dian'ny mpividy hampandroso ilay olona (amin'ny hafainganam-pandehan'izy ireo) manomboka amin'ny dingana iray mankany amin'ny dingana manaraka. Tsy dia mitranga tampoka izany… ny mpividy dia mety hivezivezy eo anelanelan'ny dingana dian'ny mpividy rehefa mandeha ny fotoana.
Na izany aza, mandinika tsara ny ekipan'ny varotrao akaiky-akaiky ary misintona ny vinavina amin'ny alàlan'ny corong-varotra mba hahafahan'izy ireo maminavina ny fitomboan'ny fidiram-bolan'izy ireo (sy ny mety ho vaomiera). Nahazo ny tombam-bidiny ao anatin'ny laharam-pahamehana ny ekipa mpivarotra anao… izao dia mampihatra ny tsindry ary manome loharanom-bola hividianana ny fifanarahana any amin'ny faritra farany.
Hitanao ve ny fomba tsy filaharan'izy roa?
Ny fakana sary an-tsaina sy ny fandrefesana ny fantsom-pivarotanao dia zava-dehibe amin'ny famoahana ny fidiram-bola eto ambany sy ny fahombiazan'ny ezaka ara-barotra sy varotrao. Amin'ny ankapobeny, te-hahazo antoka ianao fa mifindra fitarihana tsirairay mahafeno fepetra manomboka amin'ny dingana iray ao amin'ny fantsom-pivarotana mankany amin'ny manaraka.
Izany dia hanome fahatokisana ny sampana varotra sy varotrao fa mitombo ny fahafaha-mitondra fiara.
Vakio bebe kokoa momba ny Funnel Sales
Raha mila fanampiana ianao amin'ny famakafakana ny famakiam-boky momba ny atiny sy ny fanaovana fanaraha-maso manohitra ny personas sy ny dingana ataonao, dia ampidino ny fantsom-pivarotana handrefesana tsara ny ezaky ny varotrao, ampahafantaro aho! Raha te hiresaka amiko momba ny fananganana programa manokana ho an'ny fiangonanao ianao, dia mifandraisa amiko. Ho an'ny ankamaroan'ny mpanjifa, tena manao an'izany aho - manontany sy manampy azy ireo amin'ny fananganana ny rafitra ary koa mampianatra ny mpiasan'izy ireo amin'ny fomba fampiharana, fandrefesana ary hanatsara ny paikadim-barotrao.
Tags: fampielezana dokadia nataon'ny mpividybuyer personastranomboky atinyolonatandroka fivarotanafantsom-pivarotanampihaino
Ireo toetra mampiavaka ny Logo an'ny orinasa
Apr 14, 2021 ao amin'ny 3: PM PM
Lohahevitra tena tsara, saingy azonao lazaina fa tsy proofread io.
Apr 19, 2021 ao amin'ny 3: PM PM
Maniry aho fa afaka manana mpanitsy sy mpanonta!